Dani Alves oo ka shaqaynaya arrin aysan jeclaysan Juven iyo taageerayaasheeda! – Gool FM
Dani Alves oo ka shaqaynaya arrin aysan jeclaysan Juven iyo taageerayaasheeda!
Raage March 10, 2018
(Torino) 10 Maarso 2018 – Dani Alves ayaa la sheegayaa inuu qalqaalinayo sidii uu Paulo Dybala uga dhaadhicin lahaa inuu Juventus u waydaarto Paris Saint-Germain fasalka soo aaddan, sida uu sheegayo Tuttosport.
Labada laacib ayaa hal fasal-ciyaareed ku wada qaatay Torino, balse waxaa la sheegayaa inay saaxiibbo isku dhow noqdeen, qarsoodina maaha inuu Dani Alves doonayo inuu wiilka reer Argentine kasoo wado Torino, taasoo uu isku dayay bishii Juun 2016.
“Dybala waa inuu ka tegaa Juventus, ma aqaan goorta, balse haddii uu doonayo inuu sii hormaro. Waa inuu kooxdaasi ka tagaaa oo hardanno cusub qaataa.” ayaa lagasoo xigtey.
Sida ku qoran Tuttosport, Dani Alves ayaa qalqaalo ugu jira in uu Dybala keeno Paris Saint-Germain, halkaasoo uu kula biiri doono xiddigaha Neymar, Kylian Mbappé iyo Edinson Cavani.
Yeelkeede, La Joya ayay adag tahay in warkaa lagu qanciyo, gaar ahaan maaddaama ay Juve sanadkii 2-aad Champions League uga natiijo fiican tahay kooxda PSG.
Imaanshiyaha Reina oo la sheegayo inay Donnarumma ku xiirayso dhanka PSG
DEG DEG: Messi oo Daqiiqadihii ugu dambeeyay laga reebay Shaxda Barcelona ee Caawa kaddib Xaaskiisa....